Mi Dog Umhlahlandlela
I-Encyclopedia yabanikazi bezinja
Ungabona kanjani ukuthi inja ikhishwe i-neutered?
Isigaba: Ukugcinwa nokunakekelwa 0
Ukungabibikho kwamasende: Indlela elula yokwazi inja engenawo amasende ukungabibikho kwamasende. Ngaphezu kokungabi nawo amasende abonakalayo ku-scrotum yakhe,…
Iyiphi inja ewine inja yokuhlenga ewuphawu?
UBig Rig uthweswe umqhele wokuba yiBest in Wrinkles. Ubani owine i-Dog Rescue 2020? Odle umhlanganiso ku-Belly Rubs, Ushukela uklonyeliswe njenge-Best in Rescue. Wenza njani…
Ingabe i-mini bull terrier iba nkulu kangakanani?
Njengazo zonke izinhlobo zezinkunzi, i-Miniature Bull Terrier ipakisha inqwaba yemisipha ohlakeni lwayo. Ubude busuka ku-10 kuye ku-14 amayintshi futhi isisindo sisuka…
Umbuzo wakho: Ingabe izinja ezinolaka zihlala zinolaka?
Ingabe inja enolaka ingaqeqeshelwa ukuba ingabi nolaka? Ingabe ukuqeqesha inja enolaka kungenzeka? Yebo. Ulaka ezinjeni, kungakhathaliseki ukuthi kumnikazi wenja noma...
Imaphi amakilasi angcono kakhulu okuqeqesha izinja aku-inthanethi?
Ingabe izifundo zokuqeqesha izinja eziku-inthanethi ziyasebenza? Ngaphandle kwezimo ezimbalwa ezingavamile, ukuqeqeshwa okubonakalayo kusebenza kahle, futhi ngezinye izikhathi kungcono kuneseshini yokuqeqeshwa komuntu siqu. Ngingaziqeqesha kanjani...
Ngingayenza kanjani inja yami ekhubazekile phansi ezitebhisini?
Ngingayenza kanjani inja yami endala ukuthi yehle ngezitebhisi? Ngokusekelwe kulokho okuhlangenwe nakho, ngincoma ukuzama ukunamathela ezitebhisini eziphikisana nokushelela noma ukunyathela okunokhaphethi okungasheleli. Wena...
Ingabe kufanele ngithole inja lapho ngithatha umhlalaphansi?
Kungani kufanele uthole inja uma usuthatha umhlalaphansi? Izinja Zikhuthaza Umuzwa Wezinja Zomphakathi azigcini nje ngokuhlinzeka ngobuningi bobungani nothando zizodwa, kodwa…
Uyigcoba kanjani inhlaba enjeni?
Ngingakwazi ukufaka inhlaba esikhumbeni senja yami esilumayo? A: Yebo, ungasebenzisa ijeli yenhlaba ezinjeni ezinesikhumba esilumayo ukuze unciphise ukuvutha nokucasuka….
Umbuzo wakho: Kwenzekani uma ungayiphephi inja yakho yesifazane?
Izinja ezinsikazi zingathola izimo eziningi ezisongela ukuphila uma zingabhenywa. Bangathola ukutheleleka kwesibeletho, okubizwa nge-pyometra, okudinga ukuhlinzwa okuphuthumayo. Uma lokhu…
Yini ebangela ukuvuvuka kwezinsini ezinjeni?
I-Gingival hyperplasia ibhekisela esimweni sezokwelapha lapho izicubu zenja (gingival) zivuvukala futhi zande. Ukwandiswa kuvame ukubangelwa ukucasuka ngenxa yoqweqwe lwamazinyo...
1 2 ... 3,011 Olandelayo
Sawubona, igama lami nginguPeter. Kubhulogi lami uzothola lonke ulwazi olubalulekile ngezinja - izinhlobo, ukukhuliswa, ukunakekelwa, izinhlamvu, amaqiniso athakazelisayo, njll.
Kufanele ngikhathazeke nini ngezinja zami ukukhishwa iso?
Zenzani izinja uma zidakiwe?
Ingabe izibuko zelanga ziyazisiza izinja nge-cataract?
Umbuzo wakho: Kwenzekani uma ubona inja emnyama?
Uyiqeqesha kanjani inja ukuthi ingene ngomnyango wezinja?
Yiziphi izinhlelo ze-TV izinja ezithanda ukuzibukela?
Kungani inja yami iqhubeka nokuxakeka?
© 2021 Mi Dog Umhlahlandlela
UKUNAKEKELWA KWABAPHATHI BAKWESOKUDLA! Zonke izinto ezithunyelwe kusayithi zihloselwe ukwazisa kanye nokufundisa! Uma ukholwa ukuthi ukuthunyelwa kwanoma yini ethile kwephula i-copyright yakho, qiniseka ukuthi usithinta ngefomu lokuxhumana futhi nezinto zakho zizosuswa!